China B UFO Light ụlọ ọrụ na-emepụta | Liper
Ike dị elu 50watt IP65 Down Light
Hot Na-ere BS Floodlight
Kachasị Ere HS Solar Floodlight
Angle Kemeghi E Track Light
B UFO Ìhè
IP65 Ala Light Generation II
Ukwuu nwere ike ikwu C Street Light
M Iju Mmiri
OA CB RoHS
.Dị Ike Lumen DIM Nha ngwaahịa
A na-eji ọkụ n'ọnụ mmiri dị elu eme ihe na ama egwuregwu, ụlọ ahịa, ụlọ nkwakọba ihe na ụlọ ọrụ mmepụta ihe. Ebe ndị a niile nwere ihe na-ahụkarị: Uko ụlọ dị oke elu, ọ dịghị mfe ịwụnye ma ọ bụ dochie ya. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịwụnye ma ọ bụ dochie ọkụ ọkụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe, ajụjụ dị ezigbo mkpa na-abịa: Otu esi ahọrọ ezigbo ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ?
Ogologo oge, ike ike, nhazi dị mma, nchapụta, na-efu ihe ndị a niile ị ga-atụle.
Lipper IP65 UFOs nwere ike ịnye gị ezigbo ihe ngwọta ọkụ ụlọ ọrụ iji mezuo ihe ndị a niile.
Kedu otu ọ bụ?
Ihe eji eme ihe—Thedị UFO nwere nku dị jụụ niile n'otu imewe, dị mfe ma dịkwa mma, dị iche iche n'ahịa. M onwe mode, ị na-enweghị ike ịhụ kpọmkwem otu ihe na ahịa.
Anwụ ngwa ngwa—Die casting aluminom heat sink na jụrụ fins hụ ezigbo okpomọkụ dissipation. Mgbe ị na-eme ule ịka nká dị elu, anyị na-emekwa nchọpụta okpomọkụ nke akụkụ dị mkpa nke oriọna, dị ka mgba ọkụ, inductance, mosfet, body lamp. Lipper ikanam UFO ọkụ na-ezi mgbochi corrosion mkpuchi nke nwere ike n'oge gara aga 24 awa nnu nnu ule. Igwe ọkụ na-achịkwa ọkụ na eserese na-egbochi ogologo ndụ (30000 Hrs.).
Ike ọkụ na ihie—100W na 200W ụdị abụọ dị. Ọkụ ndị a na-arụ ọrụ na arụmọrụ nke 100lm / w dị ka data nyocha site na ime ụlọ anyị gbara ọchịchịrị. N'iji ya tụnyere ọkụ ọdịnala ochie ọ nwere ike ịchekwa ike ruo 70%.
Nchedo IP—Igwe ọkụ anyị nke UFO nwere ike iru IP65 nwalere site na igwe nyocha mmiri na-enweghị mmiri n'okpuru steeti na-ekpo ọkụ maka awa 24.
Mmetụta Na-enwu—CRI dị elu na R9> 0 (a nwalere site na ijikọta gburugburu) nwere ike ime ka isiokwu ahụ n'okpuru ọkụ nwee agba karịa ma gosipụta ezi agba. Site na njirimara a, UFO Lipper nwere ike iji na nnukwu ụlọ ahịa, ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ iji nyere aka gosipụta ngwongwo ndị ahụ mara mma.
Ma nke ahụ abụghị ihe niile! UFO Lipper bụ CE na Rosh kwadoro ma soro akwụkwọ ikike afọ 3. Ọ dị mfe ijikwa, wụnye ma debe ya. Anyị na-enyekwa faịlụ IES maka ndị ahịa na-arụ ọrụ ka ị nwee ike ịmegharị ezigbo ọnọdụ ọkụ maka ọrụ ahụ.
Nke gara aga: E Light Light Panel
Osote: Angle Kemeghi E Track Light
High Bay Light mkpuchi
High Bay Light eletrik
Ufo Dugara High Bay Light
UFU LED oriọna 100w
Nwere ajụjụ ọ bụla gbasara ngwaahịa anyị?
Biko hapuru anyi ozi anyi g’aghachighachi gi ASAP.
Nke ise, ụlọ 1, No.233 Haitang Road, Wenzhou Eco & Tech Development Mpaghara, Wenzhou City.
Liper C Series Streetlight A Street Lig ...
Olee otú iji wụnye ikanam n'okporo ámá?
Copyright - 2020-2021: All Rights echekwabara. Nkwado ndị teknuzu:
Weebụ QR Code